Qaar kamid ah Jamaacaadka Jihaadiga wadanka Suuriya oo kahoryimid heshiiskii Sotshi ee Ruushka iyo Turkiga. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Qaar kamid ah Jamaacaadka Jihaadiga wadanka Suuriya oo kahoryimid heshiiskii Sotshi ee Ruushka iyo Turkiga.
On Sep 24, 2018 205 0
Iyadoo dhawaan magaalada Sootshi ee dalka Ruushka madaxweynayaasha wadamada Ruushka iyo Turkigu ku gaareen heshiis ka kooban dhowr qodob, kuwaas oo dhamaantooda lagu hagar daameynayo Jihaadka Shaam ayaa waxaa shirkaas ka horyimid guud ahaan shacabka muslimka ah ee Suuriya.
Maalintii Jimcaha lasoo dhaafay waxaa inta badan magaalooyinka wuqooyiga Suuriya ka dhacay banaanbaxyo lagu diidanyahay qorshe weliba oo lagu majaxaabinayo Jihaadka iyo kacdoonka Suuriya, waxayna dadku ku dhawaaqayeen halkudhigyo ay ku diidanyihiin Ruushka iyo Nidaamka Bashaar Al-asad.
Qaar kamid ah Jamaacaadka Jihaadiga ee dalka Suuriya ayaa markii ugu horeysay ka hadlay siday u arkaan natiijooyinka kasoo baxay shirkii Sotshi ay ku yeesheen Rajab Dhayib Ordogan iyo Faladamir Butin.
Bayaan ciwaan looga dhigay Shirkii Sootshi waa daytoon 2, ayay soo saartay jamaacada jihaadiga ee Xurraasu-diin oo kamid ah jamacaadka jihaadiga ee kahowlgala dalka Suuriya, waxayna ku tilmaamtay natiijooyinka soo baxay kuwa lagu doonayo in lagu aaso Jihaadka todobo sano jirsaday ee ka socda wadankaas.
“ waxay mareysaa saaxada Shaam marxalad jaan go’an oo halis ah, waxayna awoodaha sharta iyo kufirga u kulmeen sidii ay uga takhalusi lahaayeen mashruuca Jihaadka, waxay kala qeybsadeen howsha, iyagoona kala qaatay deegaannada muhiimka ah, illaa reer Shaam ay la mid noqdeen agoomo, walaa xowla walaa quwata illaa billaahi” ayaa lagu yiri bayaanka kasoo baxay Xurraasu-diin.
Wuxuu bayaanku intaas sii raaciyay “ Anagoo ah jamaacada Xurraasu-diin waxaan iclaamineynaa markale inaan diidannahay, kana soo horjeedno shirqoolladaas iyo tallaabooyinkaas, waxaana leenahay hadalkii ay horey u yiraahdeen hogaanka Jihaadka kuwa nool iyo kuwa dhintay intuba ee ahaa “ uma dagaallamin hubkana uma qaadanin inaan talada ka tuurno dhaaquud, si dhaaquud kale uu xukunka ula wareego, ee waxaan u jihaadeynay Allaah dartii iyo in kalimadda Alle ay kor noqoto”.
Farriin muhiim ah ayaa bayaanka loogu diray jamaacaadka jihaadiga ee ka howlgala dhulka Shaam iyo guud ahaan dadka muslimiinta, waxaana Jamaacada Xurraasu-diin ay ku talisay in Allaah loo laabto, wixii khaldameyna la saxo.
“ maraxaladan halista badan ee aan dhex maquuraneyno, Waxaan ugu naseexeyneynaa walaalaheena mujaahidiinta iney Allaah u noqdaan, Naftana la xisaabiyo, oo aan la imaano towbad keen run ah, intaas kadibna aan dib u habeyn ku sameyno awoodaha aan heysano, iskuna kaashano samafalka iyo Alle ka cabsiga, lana billaabo howlgallo milliteri oo ka dhan ah cadowga diinta islaamka, howlgalladaas oo fashilin doona qorshayaashooda”.
Sidoo Jamaacada Ansaaru-diin ayaa kamid ah jamaacaadka jihaadiga ee bayaanaadka kasoo saaray shirqoolkii Sootshi, waxaana bayaan kasoo baxay jamaacadaas, laguna faafiyay baraha Internetka ay jamaacadku ku sheegtay in shirkaas uu yahay shirqool lagu doonayo in lagu aaso Jihaadka Shaam.
Jabhadda Ansaaru-diin waxay sheegtay in shirkii Sootshi uu dhameystir u ahaa shirarkii Asitana, kuwaas oo dhamaantooda lagu doonayay in lagu burburiyo Jihaadka, dadka mujaahidiinta ahna lagu qasbo iney is dhiibaan.
Waxaa bayaanka kasoo baxay Jabhadda lagu yiri “ haddii aan nahay Jabhadda Ansaaru-diin waxaan marar badan oo hore u sheegnay, hadana aan ku celineynaa inaan kasoo horjeedo shirarka Asitana, waxaana horey uga digney saameynta halista badan ee shirarkaas ku leeyihiin Jihaadkeena iyo kacdoonkeena” ayaa lagu yiri bayaanka Jabhadda Ansaaru-diin.
Ugu dambeyn baaq muhiim ah ayaa loogu jeediyay bayaanka kasoo baxay Ansaaru-diin jamaacaadka jihaadiga ee ka howlgalaya wuqooyiga Suuriya.
“ Waxaan ugu baaqeynaa dhamaan walaalaheena iney dareemaan mas’uuliyadda saaran marxaladan culeeska badan, waana iney ka gudbaan khilaafaadka u dhexeeya, dagaalka hadda socda waa dagaal ku xiran jiritaankeena, cadowgeenana nama kala soocayo, ee aan Alle uga cabsano kacdoonkeena, Jihaadkeena, dhiiga shuhadadeena, dhibaatada maxaabiisteena iyo dakeena barakacay, oo aan furno safxad cusub oo sharaf leh, oo qeyb ka ah kacdoon weyn iyo Jihaad barakeysan idinka Alle”.